(tonga teto avy amin'ny Quebec)
Saina ny Quebec
marika ny Quebec
Ny Quebec (API : /kebɛk/) dia faritany miteny frantsay any atsinanan'i Kanada. Ny renivohiny dia Québec, kanefa Montréal ny metropole-ny.
Voafaritra ny hoalan'i Ungava sy ny detroit-n'ny Hudson ny Quebec any avaratra, voafariry ny hoalan'i Hudson sy ny Ontario any andrefana, ny faritany mizaka-tenan'i Maine, ny New Hampshire, ny Vermont sy New York, ary voafaritran'ny Nouveau Brunswick, ny Terre-Neuve-et-Labrador sy ny golfe ny Saint-Laurent any atsinanana. Mihampita ny faritan'ny Quebec ny renirano Saint-Laurent.
Ny isam-pinina any Quebec tamin'ny taona 2008 dia nisy 7 750 000, misy gropy ara-kolontsaina sy ara-piteny maro any Quebec, misy nation tompontany raika ambin'ny folo izao miaina any Quebec. Ny teny ofisialiny dia fiten frantsay. Tamin'ny 2006, ny proportion ny olona miteny frantsay any izao dia lasa 79.6 isan-jato. Kanefa 81.8 isan-jaton'ny olona hono miteny fa mampiasa ny fiteny frantsay any an-tranony izy. Talohan'izany manan-tanjona mampidina ny mpiteny frantsay ny politique d'assimilation linguistique ny Acte d'union natao tamin'ny 1840.
Mapy ny Quebec tamy taona 2001
Tananan'i Quebec hita taminy satellite Spot
Ao amin'ny jeografiany, voazara faritany telo ambin'ny folo ny Quebec, ny tondron'izy ireo dia toe-tany, jeolojia, hidirografia, zava-maintso sns. Ny fandinihana ireo endrika ireo dia miankina amin'ny orinasam-panjakana amban'ny andraikitran'ny ministeran'ny fampivoarana mateza, ny ministeran'ny tontolo iainana, ny parkan'i Quebec sy ny ministeran'ny harena an-kibon'ny tany.
Manan-danja ny toerana misy an'i Quebec any atsinanan'ny Amerika avaratra. Amin'ny fivelarany, 1 667 441 km2, Ny fivelarany dia misy in-telo ny frantsa metropolitaine, in-dimy ny Alemaina sy ny Japana, na in-efapolo ny Soisa.
Maka faribolana ara-pehintany 17 ny Quebec any atsinanana katrany andrefana, ary maka faribolana ara-daharan-jarahasina 22 any avaratra katrany atsimo. Mampiasa fiozao-na ora akiroa ny Quebec, indrindra ny ora atsinanana, ora tsotra na ora naroso, sy ny ora Atlantika, tsotra na naroso (ho an'ny Nosin'i Madelena sy ny faritan'ny reserve-n'ny Listuguj), tsy mihetsika ny ora ora sasany any amin'ny faritany hafa.
Mizara sisin-tany amin'ny faritany mizaka tena amerikana efatra ny Quebec, toy ny faritany mizaka-tenan'i New York, ny Vermont, ny New Hampshire ary ny Maine. Mizara sisin-tany amin'ny faritany Kanadianina hafa ihany koa ny Quebec toy ny Terre-Neuve-et-Labrador, ny Nouveau-Brunswick ny ny Ontario. Manan-tsisin-tany amin'ny Quebec koa ny Nunavy ny Île-du-Prince-Édouard sy ny Nouvelle-Écosse.
Governemanta ny Quebec
statistika ny Quebec
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Québec&oldid=977370"
Voaova farany tamin'ny 19 Novambra 2019 amin'ny 08:27 ity pejy ity.